Yemahara software yevakagadziri uye zvisikwa | Linux Vakapindwa muropa
Yemahara software yevakagadziri uye zvisikwa
Isaac | | Zvirongwa, Free Software, Linux software
Muchikamu chino tichapa 15 emahara software mapurojekiti asina chekuitira mamwe mapurojekiti akavharwa kana aine marezenisi anodhura, kutaura zvazviri, mamwe acho anodarika dzimwe nzira dzinovharana sosi dzakavharwa. Aya mapurojekiti gumi nemashanu anoitirwa hunyanzvi uye dhizainiNaizvozvo, avo vanozvipira pachavo kugrafiki dhizaini, kutora mifananidzo, kugadzirisa vhidhiyo, kana kudhirowa kwedhijitari, vanofanirwa kuzviisa mupfungwa.
Ivo vese inowanikwa yeGNU / Linux masisitimu anoshanda, saka unogona kuzvishandisa kubva kune yako Linux kugovera pasina matambudziko. Vazhinji vavo vane chokwadi chekuti unotovaaziva, nekuti vane mukurumbira uye isu tataura nezvavo mune ino blog, vamwe vaunogona kuwana izvozvi. Ndinovimba izvi zvinobvisa kutenda kwenhema kwekuti paLinux hapana software yehunyanzvi yezvinhu izvi zvekugadzira ...
Vhidhiyo vapepeti kugadzira, gadzirisa ako mavhidhiyo, wedzera mhedzisiro, nezvimwe.
Video: inononoka kufamba mhedzisiro yemavhidhiyo ako. Chinhu chakatomboita nguva pfupi yapfuura chaive chiroto chevashandisi veLinux, sezvo pasina software yakanaka yeiyi, ikozvino iripo uye imwe yacho is slowmoVideo.
OpenShot: Izvo zvakanaka uye zvinokutendera iwe kugadzirisa vhidhiyo, kuwedzera mifananidzo, odhiyo, trim, nezvimwe. Chishandiso chakanaka chekugadzira ako mavhidhiyo uye wozoisa iwo kuYouTube, semuenzaniso.
Kdenlive: mupepeti mukuru akafanana neOpenShot, ine mhedzisiro yakagadzirirwa izvo zvinogona kuve zvinotsiva zvakanaka zvezvimwe zvigadzirwa zveAdobe.
Chinovhara wezvaiitika kunyora zvinoitika pakombuta yako:
Vokoscreen: Anwendung yekukanda chidzitiro iyo inobvumidza iwe kuti utore zvese zvinoitika pachiratidziri, zvakare ine sarudzo dzakawanda dzekugadzirisa kurekodha kwako, senge screeshot kana skrini inotorwa, screencast (vhidhiyo), rekodhi chete hwindo, yakazara skrini, nzvimbo yakatarwa , nezvimwe.
Kazam: Kufanana neiyo yapfuura, iyo inokutendera iwe kutora zvinoitika pane yako yekutarisa nenzira yakapusa, ine dzakasiyana siyana zvinyorwa zvekurekodha.
NyoreScreenRecorder: sekutaurwa kwezita iri nyore, asi rine simba. Iyo zvakare inotsigira OpenGL vhidhiyo mutambo wekurekodha. Inoshanda zvakanyanya mushe kunyangwe iwe ukashandisa akawanda maratidziro.
Modelling uye mifananidzo. Saka kuti urege kugadzira mafirimu, zvirinani uvaite ...:
Blender: mumwe munhu wekare waunoziva. Iyo yakagozha uye nyanzvi software. Icho chakanyanya kunaka, chakatombo shandiswa kugadzira akakosha mavhidhiyo emitambo mazita kana mifananidzo mu cinema, zvakare mamwe mafirimu eHollywood akaishandisa kuita mamwe madhijitari mhedzisiro.
qStopMotion: chirongwa chekugadzira ako maficha, chimwe chinhu chausingakwanise kuita nevhidhiyo edhita Uye zvakare, zviri nyore kwazvo kushandisa, poindi mukufarira kwayo.
Kudzokorora uye kugadzirisa mifananidzo, PhotoShop inotsiva:
MyPaint: Kana iwe uri nyanzvi yekudhirowa nemapiritsi eWacom, iri ndiro chirongwa chako. Nayo unogona kugadzira uye kudhirowa chero chaunoda nehurongwa hwakanaka hwehunyanzvi. Nyore, yemahara uye nyanzvi ...
Hugin: gadzira yako wega panoramic mufananidzo unganidzo. Haisi yakapusa, asi kana iriyo yakaoma. Kana iwe uchizviziva, iwe unogona kuwana zvisingaite mabasa.
Pencil- Gadzira mifananidzo yakajeka nekukurumidza.
Inkscape: Munhu wekare waunozivana naye, chirongwa icho chisiri nyore kwazvo kumudzidzi, asi chakasimukira kugadzira mifananidzo yako ye vector. Chinhu chakanaka ndechekuti kune zvakawanda zvekudzidzisa pamambure ...
Krita: Zvinonzwika zvakajairika kwauri zvakanyanya, yakanaka kwazvo uye yepamberi pendi super app iyo inokutendera iwe kushandisa kunyange sarudzo dzisingawanikwe muGIMP kana Photoshop.
GIMP: chimwe chirongwa chakakurumbira uye chinonakidza kuve nekutsiva kukuru kweAdobe Photoshop. Chinja, gadzirisa, gadzirisa uye gadzira mhedzisiro mumifananidzo yako sezvaungaita nechirongwa cheAdobe.
Kusviba: Kana iwe uchida Adobe Lightroom uye uri kutsvaga imwe nzira, iyi isoftware yako. Iwe unozogona kushanda neRAW mifananidzo yedhijitari uye nekuchinja.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Yemahara software yevakagadziri uye zvisikwa
Gpick (Yakanyanya Simba) uye Agave (Standard Colors) yevaravara palettes.
Mahara hofisi Dhirowa yekutara.
LibreCad kuunza 3D modhi kune chaicho.
Mubvunzo, musiyano uripo pakati peKrita neGimp? Yekutanga inondibata.
Yekutanga (krita) yakanangana nekudhirowa kwedhijitari, uye yechipiri (gimp) yakanangana nekutora mifananidzo, ese ari maviri anogona kushandiswa kune ese ari maviri, zvinoenderana nekuti unoziva sei imwe neimwe, asi pakutanga ivo vakagadzirirwa izvo zvandambotaura. xD
Mhoro Gimp yakafanana neiyo Photoshop ine imwecheteyo yekugadzirisa mifananidzo uye unogona kugadzirisa mapfupi, unogona kupenda kana kudhirowa, unogona kurekodha mabrashi pakuda kwako kunoona kumanikidzwa kwehwendefa (wacom inorikurudzira kuti igare nekuenderana) .
Kune rimwe divi Krita yakafanana neCore Painter, ine mabhurashi mazhinji ehunyanzvi, mamwe mabrashi sarudzo, iine (piritsi) iwe unonzwa kudzora kuri nani kwetambo, unogona kumisikidza zvinopinda zvakanangana, senge gimp uye Photoshop ine zvivakwa uye penda, sarudzo yemuvara uye mamwe mabhurashi anofambidzana, senge phptochop cs6, tenderera iyo cam uye zoom munguva chaiyo, unogona kushanda mumafomati eruvara: RGB, CMYK uye mune yekupedzisira vhezheni iwe unogona kutogadzira makatuni, aine ekupedzisira maturusi zvimwe seTV pendi Mhuka Pro.
Natron anopinda ekugadzirisa vhidhiyo
Vane hutsinye vese.
Hugin panorama musiki, iri suite yekugadzirisa mifananidzo uye kuishandura kuti ive yepamusoro-nyanzvi panoramic mufananidzo. Ehezve, kuti uwane iyo yese mutambo iwe unofanirwa kuziva maitiro ekuishandisa.
Pasina chekuziva, nehungwaru uye nekutevera wizard, ndichisiya akawanda esarudzo uye marongero emamiriro ezvinhu, ndawana, nemifananidzo kubva kunhare mbozha, mhedzisiro inogamuchirwa. Ndino kurudzira 100℅.
mhiripiri musoja akadaro
Unogona here kuwedzera Godot, yakavhurwa sosi yemutambo injini
Pindura Pepper Soldier
Vhura Broadcaster Software
synfig inokurudzirwa chaizvo kune 2D mifananidzo
Pindura kuna bazza
Roberto Guzman Caviedes akadaro
Mangwanani akanaka kune vese vanogona kundiverengera,
Ndanga ndiri mugadziri wemifananidzo kwenguva yakareba kuti ndigare ndakura, asi mumakore matatu kana mana apfuura Corel Draw anga achigadzira musoro wakakomba kwandiri nekuda kwenyaya yekusave yekutanga nzwisisa kuti yatsemuka, ndinoziva kutyora asi hazviite kuitenga nekuda kwezvimwe zvikonzero izvo zvisina basa izvozvi, Mubvunzo wangu.
Izvo zvinokwanisika kushandisa manyorerwo akadai seInkscape, Scribus, Kdenlive uye Blender pane Windows inoshanda sisitimu, kana zvichidikanwa kutamisa iyo inoshanda sisitimu futi.
Ndokumbirawo izvi zvinondikurudzira uye ini ndingafarire chero rubatsiro
Pindura kuna Roberto Guzmán Caviedes
Mhoro… Ndinoda kutsvaga software inondibatsira kutevedzera nzira iyo nharembozha (fiber optics) inovakwa mumaguta… nenzira yepfungwa… nemifananidzo yakapusa asi inomiririra.
chimwe chinhu chakadai.
Ndeapi mahara software aunokurudzira?
Maitiro ekugadzirisa Ubuntu kuti ive nani mashandiro
Ziva Linux log mafaera